Petition · A Better Way to Help the Rakhine People of Myanmar · Change.org
A Better Way to Help the Rakhine People of Myanmar
Khin Latt started this petition to Tell United Nations Human Rights
We are sending this online petition because of United Nations Human Rights’ news release dated 13 June 2012 titled “Tensions between ethnic and religious minorities threaten Myanmar’s democratic transition” .
Myanmar is at the beginning of its journey towardsafully democratic political system. After several decades of repressions and human rights abuses, the people of Myanmar, including the people of Rakhine State, are beginning to grasp the basic principles of democracy such as freedom and equality. We are confident that UNHR are fully aware of the still ongoing efforts of the Myanmar government and ethnic groups in national unity and the ending of violent conflicts in the border areas.
The most crucial fact is, after years of neglect by previous governments, the Myanmar people are suffering hugely from under investment in education, healthcare and social welfare. The rule ofademocratic legal system and an open and transparent judicial system are yet to be established. These facts are causingalot of anxieties in the long established ethnic groups of Myanmar and most importantly, the people of Rakhine state.
So we would like to strongly point out that these anxieties, fears and insecurities are the root causes of the recent violent clashes in the Rakhine State. Under the current circumstances the people of the Rakhine state are not ready to accept people fromadifferent ethnic group. So the mounting international pressure and strongly worded messages from UN organisations could be counter productive and the cause of further unrests in the Rakhine State.
We would like to urge United Nations Human Rights to show understanding and sympathy towards the people of Myanmar, especially towards the people of the Rakhine ethnic group. We would gratefully welcome your help and assistance towards the democratic future where all people of Myanmar can live equally, harmoniously and peacefully.
(Petition in Myanmar Unicode)
နစှေဲ့ - ၁၇ရကျ ဇှနျလ ၂၀၁၂ခုနှဈ
၂၀၁၂ ခုနှဈ ဇှနျလ ၁၃ရကျနေ့ စှဲပါ United Nations Human Rights ၏ news release တှငျ ဖျောပွထားသော ““Tensions between ethnic and religious minorities threaten Myanmar’s democratic transition” ခေါငျးစဉျ သတငျး ကွောငျ့ ဤ Online Petition ကို ပွုလုပျလိုကျရပါသညျ။
မွနျမာပွညျ သညျ ဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျးမှနျ ပျေါ ရောကျရနျ စတငျနဆေဲ အခြိနျမြှသာ ရှိပါသေးသညျ။ နှဈပေါငျးမြားစှာ ဖိနှိပျခံရမှု၊ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျ ခံခဲ့ရ မှု မြားကွောငျ့ ရခိုငျဒသေ အပါအဝငျ မွနျမာ ပွညျ တဈဝှမျးလုံး တှငျ တရားဝငျ မှီတငျး နထေိုငျသူ အမြားစုမှာ ဒီမိုကရစေီ ၏ အခွခေံ သဘောတရား မြား ဖွဈသော လှတျလပျခွငျးနှငျ့ ညီမြှခွငျးတို့ကို ကောငျးစှာကငျြ့သုံး နိုငျအောငျ ကွိုးစားဆဲ သာ ရှိပါသေး သညျ။ တိုငျးရငျးသား စညျးလုံး ညီညှတျမှု ရရနျ၊ ပွညျတှငျးစဈမြား လုံးဝ ဆိတျသုဉျးသှားစရေနျ မွနျမာ အစိုးရနှငျ့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုမြားမှ ကွိုးစားနဆေဲ ဖွဈသညျကို လဲ UNHR မှ သိရှိပွီးဖွဈမညျ ဟု ယုံကွညျပါသညျ။
ထို့အပွငျ အရေးအကွီးဆုံး အခကျြမှာ ယခငျအစိုးရ အဆကျဆကျ မှ လဈလြူရှုမှုကွောငျ့ မွနျမာပွညျသူအမြားစု၏ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး အခွအေနေ မြား သညျ အလှနျ နိမျ့ကလြကျြ ရှိပါသညျ။ နိုငျငံတှငျး တှငျ ဒီမိုကရစေီ စနဈကသြော တရားဥပဒနှေငျ့ ပှငျ့လငျး၍ မွငျသာသော တရားစီရငျရေးစနဈ မရျှိသေးပါ။ ဤအခကျြမြား က ပငျ မွနျမာနိုငျငံ ရှိ ရခိုငျဒသေ အပါအဝငျ တိုငျးရငျးသား ပွညျသူ မြား အတှကျ စိတျလုံခွုံမှု မရှိသညျ့ ဘဝ ကို ဖနျတီး ပေးထားပါသညျ။
ထို စိုးရိမျမှု၊ ကွောကျလနျ့မှု နှငျ့ စိတျလုံခွုံမှု မရှိသညျ့ အခွအေနေ မြားကပငျ မကွာခငျက ရခိုငျပွညျနယျ တှငျဖွဈပှါးခဲ့သော အကွမျးဖကျမှုမြား၏ အကွောငျးရငျးမြား ဖွဈသညျဟု ခိုငျမာစှာ ထောကျပွလိုပါသညျ။ ယခု အခွအေနေ တှငျ ရခိုငျ ဒသေ မှ လူမြားသညျ လူမြိုးခွားမြားကို လကျခံရနျ အဆငျသငျ့ ဖွဈမညျ မဟုတျပါ။ ဤအခြိနျတှငျ ပွညျပ မှ ဖိအားပေးခွငျး နှငျ့ UNHR မှ ပွငျးထနျသော အသုံးအနှုနျး မြားနှငျ့ ဝဖေနျခကျြ မြားသညျ ရခိုငျဒသေ အတှငျး ဆကျလကျ၍ နိုငျငံရေး မတညျငွိမျ အောငျ ဖနျတီး သကဲ့ သို့ ဖွဈ နိုငျပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှ တိုငျးရငျးသားပွညျသူ အမြား အထူးသဖွငျ့ ရခိုငျ ပွညျသူမြား ကို UNHR မှ နားလညျ မှု နှငျ့ စာနာထောကျထားမှုမြား ပွသပေးပါရနျ တိုကျတှနျးအပျပါသညျ။ မွနျမာပွညျ အတှငျး မှီ တငျးနထေိုငျ သော သူမြား ညီမြှ စှာ၊ ညီညှတျစှာ၊ အေးခမျြးစှာ အတူ ယှဉျတှဲ နနေိုငျမညျ့ ဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျး ပျေါသို့ မှနျကနျ စှာ ရောကျအောငျ ကူညီ ပံ့ပိုး မှုမြားကိုလဲ ကြေးဇူးတငျ ဝမျးမွောကျစှာဖွငျ့ ကွိုဆိုပါသညျ။
(Petition in Zawgyi Font)
နေ့စွဲ - ၁၇ရက် ဇွန်လ ၂၀၁၂ခုနှစ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၃ရက်နေ့ စွဲပါ United Nations Human Rights ၏ news release တွင် ဖော်ပြထားသော ““Tensions between ethnic and religious minorities threaten Myanmar’s democratic transition” ခေါင်းစဉ် သတင်း ကြောင့် ဤ Online Petition ကို ပြုလုပ်လိုက်ရပါသည်။
မြန်မာပြည် သည် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းမှန် ပေါ် ရောက်ရန် စတင်နေဆဲ အချိန်မျှသာ ရှိပါသေးသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖိနှိပ်ခံရမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ခံခဲ့ရ မှု များကြောင့် ရခိုင်ဒေသ အပါအဝင် မြန်မာ ပြည် တစ်ဝှမ်းလုံး တွင် တရားဝင် မှီတင်း နေထိုင်သူ အများစုမှာ ဒီမိုကရေစီ ၏ အခြေခံ သဘောတရား များ ဖြစ်သော လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် ညီမျှခြင်းတို့ကို ကောင်းစွာကျင့်သုံး နိုင်အောင် ကြိုးစားဆဲ သာ ရှိပါသေး သည်။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှု ရရန်၊ ပြည်တွင်းစစ်များ လုံးဝ ဆိတ်သုဉ်းသွားစေရန် မြန်မာ အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှ ကြိုးစားနေဆဲ ဖြစ်သည်ကို လဲ UNHR မှ သိရှိပြီးဖြစ်မည် ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ထို့အပြင် အရေးအကြီးဆုံး အချက်မှာ ယခင်အစိုးရ အဆက်ဆက် မှ လစ်လျူရှုမှုကြောင့် မြန်မာပြည်သူအများစု၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေ များ သည် အလွန် နိမ့်ကျလျက် ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတွင်း တွင် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျသော တရားဥပဒေနှင့် ပွင့်လင်း၍ မြင်သာသော တရားစီရင်ရေးစနစ် မရှိ်သေးပါ။ ဤအချက်များ က ပင် မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ရခိုင်ဒေသ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ များ အတွက် စိတ်လုံခြုံမှု မရှိသည့် ဘဝ ကို ဖန်တီး ပေးထားပါသည်။
ထို စိုးရိမ်မှု၊ ကြောက်လန့်မှု နှင့် စိတ်လုံခြုံမှု မရှိသည့် အခြေအနေ များကပင် မကြာခင်က ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများ၏ အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်သည်ဟု ခိုင်မာစွာ ထောက်ပြလိုပါသည်။ ယခု အခြေအနေ တွင် ရခိုင် ဒေသ မှ လူများသည် လူမျိုးခြားများကို လက်ခံရန် အဆင်သင့် ဖြစ်မည် မဟုတ်ပါ။ ဤအချိန်တွင် ပြည်ပ မှ ဖိအားပေးခြင်း နှင့် UNHR မှ ပြင်းထန်သော အသုံးအနှုန်း များနှင့် ဝေဖန်ချက် များသည် ရခိုင်ဒေသ အတွင်း ဆက်လက်၍ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ် အောင် ဖန်တီး သကဲ့ သို့ ဖြစ် နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ အများ အထူးသဖြင့် ရခိုင် ပြည်သူများ ကို UNHR မှ နားလည် မှု နှင့် စာနာထောက်ထားမှုများ ပြသပေးပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ မြန်မာပြည် အတွင်း မှီ တင်းနေထိုင် သော သူများ ညီမျှ စွာ၊ ညီညွတ်စွာ၊ အေးချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲ နေနိုင်မည့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ပေါ်သို့ မှန်ကန် စွာ ရောက်အောင် ကူညီ ပံ့ပိုး မှုများကိုလဲ ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ကြိုဆိုပါသည်။
Tell United Nations Human Rights: A Better Way to Help the Rakhine People of Myanmar
Today: Khin is counting on you
Khin Latt needs your help with “Tell United Nations Human Rights: A Better Way to Help the Rakhine People of Myanmar”. Join Khin and 330 supporters today.